China Cast သံရေနုတ်မြောင်းပိုက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ |Star Good Steel
ကုသိုလ်ကံ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် သွန်းသံယို
နိဒါန်း ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော သွန်းသံပိုက်များဟုလည်း ခေါ်သည်- တံတိုင်းခတ်သံရေနုတ်မြောင်းများ၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်သော သွန်းသံရေနုတ်မြောင်းပိုက်များ၊ စက်ဖြင့်လုပ်ထားသော သံရေနုတ်မြောင်းများ၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ဆက်သွယ်မှုသွန်းသံရေနုတ်မြောင်းပိုက်များ၊ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော သွန်းသံပိုက်များကိုလည်း ခေါ်သည်- တံတိုင်းခတ်သံရေနုတ်မြောင်းများ၊ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်သော သံရေနုတ်မြောင်းပိုက်များ၊ စက်ဖြင့်လုပ်ထားသော သံရေနုတ်မြောင်းများ၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်သော သွန်းသံရေနုတ်မြောင်းပိုက်များနှင့် centrifugal cast သံရေနုတ်မြောင်းများ။ပိုက်စနစ်၏ဖွဲ့စည်းပုံမှ၊ သွန်းသံရေနုတ်မြောင်းပိုက်များကို 1. ဖြောင့်ပိုက်၊ 2. ပိုက်တပ်ဆင်မှုများ၊ 3. ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။1. ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ မြင့်မားသောခွန်အား၊ ကြာရှည်စွာအသက်ရှင်ခြင်း 2. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည် 3. အပူချိန်မြင့်မားစွာခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ မီးတောက်ခံနိုင်ခြင်းနှင့် မီးခံနိုင်ခြင်း 4. ဆင့်ပွားညစ်ညမ်းမှုမရှိခြင်း၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း 5. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ကြားခံရေနုတ်မြောင်းပိုက်သည် flexure၊ ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် ပုံပျက်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး၊ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိ၍ ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
ပစ္စည်း ASTM A536၊ အဆင့် 65-45-12၊ EN1563၊ JIS G5502၊ စသည်တို့။
အရွယ်အစား ဖောက်သည်၏ 3D ပုံဆွဲမှုအရ။
အပေါ်ယံ သွပ်ရည်စိမ်, အနက်ရောင်, သို့မဟုတ်လိုအပ်သလို။
လျှောက်လွှာ အိမ်၊ လုပ်ငန်းသုံး အသုံးချမှုများ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဟိုတယ်၊ ဆေးရုံ၊ ကျောင်းများ စသည်တို့အတွက် သင့်လျော်သည်။ အသစ်တည်ဆောက်၊ တိုးချဲ့ပြီး ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသော မြို့ပြနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများတွင် DN50mm~DN300mm၊ အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပပိုက်အချင်းများ၊ socket အမျိုးအစားနှင့် ကလစ်အမျိုးအစားချိတ်ဆက်မှု မီးခိုးရောင်သွန်းသံပိုက်များ အတွင်းပိုင်းဖိအား 0.3MPa ထက်မပိုဘဲ အိမ်တွင်းရေနုတ်မြောင်း ပိုက်များနှင့် မိုးရေကို ပိုက်များ တပ်ဆင်ရန်အတွက် ပိုက်များ၊ သံချေးတက်ခြင်းမရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ရေဆိုးပိုက်များနှင့် မိုးရေခံပိုက်များ။
စက်ရုံမှ နည်းပညာ ဝန်ထမ်းများသည် နည်းပညာ အဆင့်အတန်း မြင့်မားရုံသာမက ၎င်းတို့၏ အင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်မှာလည်း အလွန် ကောင်းမွန်ကြောင်း၊ ၎င်းသည် နည်းပညာ ဆက်သွယ်ရေး အတွက် များစွာ အထောက်အကူ ပြုပါသည်။
ယခင်- Ductile သံပိုက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
နောက်တစ်ခု: အအေးလိပ်သွပ်ရည်စိမ် ကွိုင်
Cast Iron Pipe Fittings များ
Ductile Fittings များ